I-Airways yoMzantsi Afrika kunye neqabane lase-Emirates kwiinqwelomoya zase Mzantsi Afrika nase Dubai
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Airways yoMzantsi Afrika kunye neqabane lase-Emirates kwiinqwelomoya zase Mzantsi Afrika nase Dubai
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
I-South African Airways kunye ne-Emirates zisebenzisana noMzantsi Afrika ukuya eDubai
I-Emirates isebenze ngokusondeleyo ne-SAA ukuvuselela ubudlelwane bayo ekudala bujolise ekuphuculeni amava abathengi kunye nokubonelela ngexabiso ngakumbi kubahambi xa behamba ngenqwelomoya bobabini.
I-Emirates kunye noMoya woMzantsi Afrika bebesebenzela ukwandisa ulungelelwaniso kwiimveliso nakwiinkonzo.
Isivumelwano sibandakanya iindlela ze-SAA ezinekhowudi kunye neendlela eziqhutywa yi-Emirates phakathi koMzantsi Afrika neDubai kwitikiti elinye.
I-Emirates iyakubeka ikhowudi ye-SAA kwiindlela ezinkulu ezinkulu phakathi koMzantsi Afrika neDubai.
Ngemisebenzi yoMzantsi Afrika yezoMoya (SAA), i-Emirates isebenze ngokusondeleyo neSAA ukuvuselela ubambiswano olukudala lujolise ekuphuculeni amava abathengi kunye nokubonelela ngexabiso ngakumbi kubahambi xa behamba ngenqwelomoya. Le ntshukumo ikwanceda ukuqinisa ukuma kwe-SAA kunye nokuma kwayo kwaye iya kwakha amandla okukhula njengoko umphathisi-mali ekuqaleni ebuyisela inqwelomoya kwiindawo ezintandathu zaseAfrika.
Emirates kwaye SAA Bebesebenzela ukwandisa ulungelelwaniso kwiimveliso zonke, iinkonzo kunye nokuvuselelwa konxibelelwano phakathi kweenkqubo zokunyaniseka, kwaye baya kuba beqala ngokuqalisa ngolungelelwaniso lwentengiso. Isivumelwano siquka iindlela ze-SAA ezinekhowudi kunye neendlela eziqhutywa yi-Emirates phakathi koMzantsi Afrika ne-Dubai kwitikiti elinye, okwenza ukuba abahambi bakwazi ukungena ngaphandle kweebhegi zabo kwiindawo zabo zokugqibela ukusukela ngo-Okthobha 1. I-Emirates iyakubeka ikhowudi ye-SAA kwiindlela ezinkulu ezinkulu phakathi koMzantsi Afrika kunye ne-Dubai.
UAdnan Kazim, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo, I-Emirates Iinqwelomoya, uphawule ngokuvuselelwa kobu buhlakani: “Ubambiswano phakathi kwe-Emirates ne-South African Airways lwakha ukuzibophelela kwethu ekwabelaneni kwethu ekuboneleleni abathengi ngeeshedyuli ezininzi kunye nokonyuka konxibelelwano kwi-Afrika iphela nangothungelwano lwethu olukhulayo. Siyixabisile iminyaka yethu engama-25 sisebenzisana ngempumelelo ne-SAA kwaye sisebenza nzima sithatha amanyathelo aqinisekileyo okuqhubela phambili nokukhulisa ubudlelwane bethu nokubonelela abathengi bethu ngoqhakamshelwano nangakumbi kwixesha elizayo. ”
Ingqonyela yeThutyana ye-SAA uThomas Kgokolo uthi, “Njengokuba i-SAA iqala ukwakha ngokutsha, ubuhlakani obukudala bukhona ne-Emirates buxabisekile kwaye bubalulekile kwizicwangciso zethu zokukhula kwixesha elizayo. Sabelana ngombono omnye wokungabinamthungo, ukusebenza ngokukuko kunye nenkonzo ebalaseleyo yabathengi ngokudibanisa kwiindawo ezininzi. Siqinisekile ukuba obu budlelwane buza kukhokelela ekongezeleleni kwiindlela neendlela zokuhamba, ngakumbi kulo lonke elase-Afrika njengoko sobabini siqaphela amandla ezorhwebo, ezorhwebo nezokhenketho eli lizwekazi elinalo nendima yethu ebalulekileyo njengabaxhasi. ”
Kwezi nyanga zizayo, izicwangciso ziyaqhubeka zokwandisa intsebenziswano kunye nokuqinisa intsebenziswano nangakumbi kumanqaku asekhaya nakwingingqi e-Afrika njenge YeeHambo zoMoya yaseMzantsi Afrika Yandisa ukusebenza kwayo, ngelixa i-Emirates iya kuthi kwakhona yongeze ezinye iindlela kubathengi be-SAA ukunxibelelana nokukhetha iindawo zokuya ngaphakathi kwinethiwekhi kutyelelo olunye.
Ubambiswano lwe-Emirates SAA luqale ngo-1997, kwaye kule minyaka ilishumi idlulileyo bangaphezulu kwesigidi abakhweli ababhabha kuthungelwano oludibeneyo lweenqwelomoya zombini, ezikhule zaya kwiindawo ezili-110 ngaphambi kwalo bhubhane.
Ngokubuyiselwa kobambiswano lwe-SAA, iinyawo ze-Emirates kuMazantsi neAfrika esemaZantsi zibonelela abathengi ngeendlela ezininzi kwilizwekazi liphela.